प्रत्येक भान्साको तनाव व्यवस्थापक नेपाल ग्यासको कम्पोजिट सिलिण्डर
काठमाडौं । भान्सामा रहेका सिलिन्डर सुरक्षित छन् कि छैनन्, पाइप ठिकसँग जोडिएको छैन कि ? रेगुलेटरबाट ग्यास लिक त भएको छैन ? सिलिन्डर पड्किने पो हो कि ? भन्ने चिन्ता एलपी ग्यास प्रयोगकर्ता सबैको भान्सामा पलपल हुने गर्छ । ग्यास सिलिन्डर पड्केर दुर्घटना निम्तिने गरेकाले यस्तो तनाव स्वभाविक पनि हो । तर, नेपाल ग्यासको कम्पोजिट सिलिण्डरमा भने यस्तो जोखिम छैन । एक वर्षको परीक्षणपछि व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइएको कम्पोजिट सिलिण्डरप्रति उपभोक्ताको आकर्षण रहेको कम्पनीको भनाइ छ । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिएको यो सिलिण्डर शतप्रतिशत सुरक्षित छ ।
कम्पनीका वरिष्ठ मार्केटिङ अफिसर हेमन्त शाह भन्छन्, ‘एक वर्ष परीक्षण ग¥यौँ । कुनै गुनासो नआएपछि औपचारिक बिक्री सुरू गरिएको छ ।’ आम नेपाली उपभोक्ताका लागि केही महँगो भएपनि माग बढी रहेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालको ग्यास व्यवसायमा अग्रणी संस्था नेपाल ग्यास २०२६ सालमा स्थापना भएको हो ।
विकसित मुलुकहरूमा पनि कम्पोजिट सिलिन्डर प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सिलिण्डर प्लाष्टिक र फाईबरको संयोजनबाट बनेका हुन्छन । १३५/४० बार प्रेसर थेग्न सक्ने क्षमता भएकाले यदि सिलिण्डरमा आगलागी भएपनि विस्फोट हुँदैन । यो निकै हलुका र बोक्न सजिलो छ । नेपाल ग्याँसले अहिले कम्पोजिटका दुई सिलिण्डर बजारमा उपलब्ध गराएको छ–ठूलो १४.२ किलोको र सानो ५ किलोको । ठूलो सिलिण्डरको तौल ग्याँस भरेपछि २३ किलो तथा सानोको चाहिँ ९ किलो हाराहारी तौल पुग्छ । हलुका भएकै कारण, पहाडी भू–भागमा पनि यसलाई सजिलै बोक्न सकिने तथा हिमाली पदयात्रा वा पर्वतारोहणमा जानेहरुका लागि उपयोगी छ । पाँच पटकका सगरमाथा आरोही लाक्पा शेर्पाले यसलाई हिमाली क्षेत्रका लागि निकै नै उपयोगी बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट प्रमाणित र स्वीकृत भएर कम्पोजिट सिलिण्डर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आईएसओ प्रमाणित भईसकेको छ । शाह भन्छन्, ‘हल्का अँध्यारो कोठामा लगेर फ्ल्यास लाईट बाल्नुभयो भने सिलिण्डरमा रहेको ग्याँसको मात्रा सजिलै थाहा लाग्छ ।’ अल्ट्रा भ्वाइलेट किरणबाट सुरक्षित र इकोफ्रेण्डली मानिएको कम्पोजिट सिलिण्डर सबै मौसमका लागि उपयुक्त छ । यसमा ग्यास चुहावट पत्ता लगाउने, भल्भ निभाउने र सुरक्षित राख्ने प्रविधि जडान गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मेरो किराना डट कममार्फत् कम्जोजिट सिलिण्डरको विक्री वितरण भईरहेको छ । छिट्टै नै सोलुखुम्बु लगायतका पर्यटकीय हिमाली जिल्लामा पनि यसको डिपो राख्ने तयारी भईरहेको छ ।
ठूलो सिलिण्डरको बजार मूल्य १० हजार ६ सय रहेको छ भने सानो सिलिण्डरको ६ हजार ९९२ रहेको छ । शाह भन्छन्, ‘सिलिण्डर खरिद गर्दा मात्रै केही महँगो पर्ने हो । ग्याँस रिफल त साबिकको मूल्यमा नै हुन्छ ।’ यो सिलिण्डरको मूल्य बढी हुनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले लिने भन्सार हो । फलामे सिलिण्डरको भन्सार ७ प्रतिशत छ भने कम्पोजिटले ३७ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट भन्छन्‘सुरक्षित ग्यास बजारमा ल्याउँदा भन्सार छुट दिनुका सट्टा झन बढी लिइएको छ, यसबारे मन्त्री ज्यूलाई समेत अवगत गराइ सकिएको छ ।’
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेपाल ग्यास उद्योग पूर्ण स्वचालित छ । अटोमेटिक वोटलिङ्ग प्लान्ट र परीक्षण स्थल भएको कम्पनीसँग विज्ञ प्राविधिक जनशक्ति छ । उद्योगसँग प्रत्येक सिफ्टमा १२ हजार सिलिण्डर फिल गर्ने क्षमता छ । माग अनुसार १ हजार मेट्रिक टनसम्मको भण्डार गर्ने क्षमता रहेको नेपाल ग्याँस नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्याँस उद्योग हो । हाल यसका काठमाडौँ उपत्यकामा २६० भन्दा बढी र मोफसलमा २ सय भन्दा बढी डिलर सञ्चालनमा छन् ।
नेपाल ग्याँसले कम्पोजिट सिलिण्डरको उद्घाटन कार्यक्रमकै दिन मोबाईल एप पनि सार्वजनिक गरेको थियो । एप एन्ड्रोईड मोबाईल प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै उपलब्ध छ अहिले । यसमा सेफ्टी टिप्स, ग्याँस खपतको चक्र, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ, नेपाल ग्याँस डिपोको लोकेसन तथा फोन नम्बर आदि फिचरहरू राखिएका छन् ।
प्रकाशित २२ भाद्र २0७५ , शुक्रबार | 2018-09-07 07:56:26